Ọ dị mfe njem site na UK rue Austria ụgbọ okporo ígwè. I nwere ike na-aga site London na Vienna, Salzburg ma ọ bụ Innsbruck na otu ụbọchị site elu-ọsọ ụgbọ okporo. Ma ọ bụ a nri ehihie Eurostar si London na Brussels, a Thalys elu-ọsọ ụgbọ okporo ka Cologne, na ihe ndị magburu onwe Nightjet sleeper ụgbọ okporo na Innsbruck, Linz, ma ọ bụ Vienna n'abali. ozugbo e, na-na Tirol dị mfe na ya mbara netwọk nke ọha iga. Ọ dị mfe na-eme njem gburugburu region iji ụgbọ oloko. Hikers na-achọ inwere na-na akụkụ ma ọ bụ niile nke Eagle Walk nwere ike ịnweta mmalite na imecha ihe ndị ọ bụla ogbo eji obodo ọha iga.
Thunder Hiking Malite ihe: CAMINO DE SANTIAGO - SPAIN
The Camino mara na English dị ka Way of St James. Camzọ njem njem Camino niile na-eduga Santiago de Compostela n'ihi na nke a bụ ebe foduru St James, (Santiago), e chọpụtara na narị afọ nke itoolu. A na-ewu ewu njem uka na 10th, 11nke, na narị afọ nke iri na abụọ wee jiri nwayọọ jụ na ewu ewu.
Site na narị afọ nke 20, fọrọ nke nta ka ọ dịghị onye na-eje ije ọ bụla nke ụzọ gasị. Ekem ke utịt utịt iduọk isua 1970 ye ntọn̄ọ ntọn̄ọ iduọk isua 1980, usụn̄ emi ama otụk owo ifan̄. Ha malitere ide na map ụzọ gasị ọzọ.
site Lugo, na ụgbọ okporo bụkwa nhọrọ kachasị mma. Renfe awade ọtụtụ kwa ụbọchị jikọrọ ga-ị na Sarria si Lugo na 30 nkeji.
Ọ nwere ike kwuru na Westweg nzọ bụ niile si malite German anya hiking ụzọ ụkwụ. Ọ ghọrọ onye mbụ ẹkedọhọde ụzọ nke ya ụdị azụ na 1900. Kemgbe ahụ, nzọ ka toro ikpuchi a anya nke 177 kilomita (285 kilomita) - bido na Pforzheim na north na ogwugwu na Basel na ndida.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hiking-start-points%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#hikes #hiking #Ikzọ Hikingstarting #ụzọ ụkwụ longtrainjourneys trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ